Iingxelo zokuThengisa Inkcazo - I-Glostary Chemistry
Yiyiphi Inkolelo Yobomi? Hlaziya iikhompythi zakho zeKhemistry
Iingxelo zokuThengisa Inkcazo
Isivuno sezinto ezibonakalayo bubungakanani bemveliso efunyenwe ukuguqulwa okupheleleyo kwendlela yokumelana nokukhawulelana kwindlela yamakhemikhali. Yimalini yemveliso ephuma kumpompo opheleleyo osebenzayo kwaye ke awufananga nomlinganiselo oya kuwufumana ukusabela. Isivuno se-theory sichazwa ngokuqhelekileyo ngokwemigrama okanye i- moles .
Iimpazamo eziqhelekileyo: i -yeild yeil
Ngokuchaseneyo nomvuno wemfundiso, isivuno sangempela ngumlinganiselo wemveliso ngokwenene eveliswa yimpendulo. Isivuno esiyiyo ngokuqhelekileyo sininzi elincinci ngenxa yokuba iimpendulo ezimbalwa zeekhemikhali ziqhubeka nokusebenza kakuhle kwe-100%, ngenxa yokulahlekelwa kwemveliso, kwaye ngenxa yokunye ukuphendula kungenzeka ukuba kunciphise umkhiqizo. Ngamanye amaxesha ukuvelisa okuninzi kunokuveliswa kwemfundiso, mhlawumbi kuba ukuphendula okwesibini kubangela umveliso okanye ngenxa yokuba umkhiqizo ofunyenweyo uqukethe ukungcola.
Umlinganiselo phakathi kwesivuno esivakalayo kunye nesivuno semfundiso esoloko sinikezelwa rhoqo njengesivuno sepesenti :
ipesenti isivuno = ubuninzi beethamo / ubuninzi beemveliso zecandelo x 100%
Ukubala Ukuzaliswa Kwezinto Ezikhoyo
Isivuno sezinto ezibonakalayo sifumaneka ngokuchonga umonakalo owenzayo wokulinganisela kweekhemikhali. Ukuze uyifumane, isinyathelo sokuqala silinganisa i-equation , ukuba ayilungelelanisi.
Isinyathelo esilandelayo kukufumanisa ummangali owenzayo.
Oku kusekelwe kwi-mole ratio phakathi kwama-reactants. Umngqamaniso wokumisela awufumaneki ngaphezu koko, ngoko impendulo ayikwazi ukuqhubeka xa isetyenziswe.
Ukufumana umonakalo owenzayo:
Ukuba ubuninzi bama-reactants banikezwa nge-moles, guqula ixabiso ukuya kwigramu.
Hlukanisa ubunzima kwigram yomlambo ophendulayo ngesisindo samathambo kwigramu nganye.
Ngaphandle koko, kwisisombululo sesisombululo, unokuphindaphinda isixa sesisombululo esisabelayo kwi-milliliters ngobuninzi balo kwigrama nganye nge-milliliter. Emva koko, ukwahlula ixabiso nge-mass molar mass.
Yandisa ubuninzi obufunyenweyo ngokusebenzisa enye indlela ngenani le-moles ye-reactant kwi-equation equation.
Ngoku uyazi i-moles nganye. Thelekisa oku kumlinganiselo we-molar we-reactants ukugqiba isigqibo esifumaneka ngaphezu koko kwaye esiya kusetshenziselwa kuqala (umonakalo owenzayo).
Emva kokuba uqaphele umonakalo owenzayo, phinda i-moles yeempendulo zokunciphisa ixesha eliphakathi kwama-moles omonakalo kunye nomkhiqizo olinganayo. Oku kukunika inani le-moles nganye yemveliso.
Ukufumana igram yomveliso, wandisa ii-moles zexesha ngalinye lomkhiqizo ubunzima bomzimba .
Umzekelo, kwindlela ozama ngayo ukulungiselela i-acetylsalicylic acid (i-aspirin) ukusuka kwi-salicylic acid, uyazi ukusuka kwi- equation equaling for aspirin synthesis ukuba i-mole ratio phakathi kwe-reactantant (salicylic acid) kunye nemveliso (i-acetylsalicylic acid) yi-1: 1.
Ukuba une-0.00153 iilesi ze-salicylic acid, isivuno semfundiso yile:
isivuno semfundiso = 0.00153 i-salicylic acid x (1 i-acetylsalicylic acid) / i-1 sal saliclic acid) x (180.2 g acetylsalicylic acid / 1 i-acetylsalicylic acid
isivuno semfundiso = 0.276 amagremu acetylsalicylic acid
Ewe, xa ulungiselela i-aspirin, awuyi kufumana loo mali! Ukuba ufumana uninzi, mhlawumbi unomlinganiselo ongaphezulu okanye ukuba umkhiqizo wakho ungcolile. Kungakumbi, uya kufumana ubuncinci kuba impendulo ayiyi kuqhubeka i-100% kwaye uya kulahleka umkhiqizo ozama ukuwufumana (ngokuqhelekileyo kwisihlungi).
Umthetho kaRaoult Umzekelo Weengxaki - Uxinzelelo lweVapor kunye ne-Strong Electrolyte
Umthi weKrisimesi Indlovu yokugcoba i-Chemistry Ukubonakalisa
Imincili Imisebenzi Yokubulela Imindeni YamaKristu
Iimifanekiso ezi-10 eziphambili ze-Identity Movies
I-Ohalo II - Indawo ePaleolithic ephezulu kwiLwandle laseGalili